बिहिबार, ०८ माघ २०७७, ११ : ३७
आफ्नै फोटो खिच्ने सुत्केरी
बच्चा जन्माउने बेलामा महिलाहरू प्रसव वेदनाले आलसतालस हुने गर्छन् । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिकाको सेन फ्रान्सिसकोकी एउटी महिलाले बच्चा जन्माउँदै गरेको अवस्थाको आफ्ना केही तस्बिर खिचेकी छिन् । उनको यो कामलाई धेरैले साहसी र अद्भुत मानेका छन् ।
टोरोन्टो क्यारेबियन कार्निभल
क्यानडाको टोरोन्टोमा सम्पन्न टोरोन्टो क्यारेबियन कार्निभलका सहभागी । क्यानडाको टोरोन्टोमा सम्पन्न टोरोन्टो क्यारेबियन कार्निभलका सहभागी ।
आफ्नै काँचुलीमा कैद सर्प
माकुरा आफैँले बनाएको जालमा फसेको प्रसंग बेलाबेलामा सुन्न पाइन्छ । तर, सर्प आफ्नै काँचुलीभित्र कैद भएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? एउटा यस्तै रोचक घटना भएको छ । सर्प काँचुलीभित्र कैद भएको एउटा भिडियोसम्बन्धी ‘हफिङ्टन पोस्ट’ले बनाएको समाचार अहिले खूब पढिँदै छ ।
पानीको वर्षा हुन्छ । कुनैकुनै ठाउँमा आकाशबाट माछा वर्षा भएको पनि देख्न पाइन्छ । तर, अमेरिकाको मियामी समुद्री किनारछेउको शहरमा आकाशबाट सोफा र कुर्सीको वर्षा भएको छ ।
फ्रान्समा हिलो महोत्सव
फ्रान्सको बिनेसमा सम्पन्न हिलो महोत्सवमा एक सहभागी ।
अमरिकी शहर वासिंगटन डीसीको सियाटल क्षेत्रमा रहेको एउटा सुपरमार्केटमा एक युवकले जथाभावी लिंग प्रदर्शन गरेका छन् । क्रिस्चियन फिसर नाम गरेका एक युवकले सुपरमार्केटबाट बाहिर निस्किने क्रममा जथाभावी लिंग प्रदर्शन गरेका हुन् ।
अमेरिकामा भएको एउटा हत्यामा कोही साक्षी फेला नपरेपछि घटना हुँदा घटनास्थलमा रहेको एउटा सुगालाई बकाइने भएको छ । अमेरिकी राज्य मिचिगनको एउटा परिवारमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच झगडा हुँदा श्रीमान्को मृत्यु भएको थियो ।
दाइजो अपुग हुँदा
भनेजति दाइजो नल्याउँदा बुहारीलाई पेट्रोल खन्याएर जलाउने अथवा कुटपिट गर्ने सुन्दै आइएको हो । तर, भारतको एउटा परिवारमा दाइजो पर्याप्त नल्याएको भन्दै एउटा घरले बुहारीलाई नौलो खाले प्रताडना दिएको छ ।
पोर्नसाइट पनि समाजसेवामा संलग्न भएको समाचार अनौठो लाग्न सक्छ । यस्तै अनौठो घटना हालसालै भएको छ । एउटा पोर्नसाइटले समाजसेवामा निरन्तर सहयोग गर्ने जनाएको छ । वेबसाइट हेरेर भिजिटरले हस्तमैथुन गरेपिच्छे निश्चित रकम समाजसेवाका लागि छुट्याउने वेबसाइट व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
खुल्दै छ नांगाहरूको रेस्टुरेन्ट
जापानमा अर्को महिना नग्न मानिसहरूका निम्ति रेस्टुरेन्ट खुल्दै छ । विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्ने ग्राहकले मात्रै रेस्टुरेन्टले पस्किने सत्कार ग्रहण गर्न पाउने छन् । रेस्टुरेन्टभित्र पस्नुअघि ग्राहकले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नियम बसालिएको छ । जापानको राजधानी टोकियोमा जुलाई २९ मा रेस्टुरेन्टको उद्घाटन हुने तय भएको छ ।
रूखभित्र वर्षाैंदेखि आगो
भित्रैदेखि खोक्रो रूख देख्नु नौलो कुरा होइन । तर, रूखमा भित्रैदेखि आफैँ आगो लाग्दै आएको सम्भवतः कतै सुन्नुभएको छैन होला । अमेरिकामा थुप्रै मानिसले यस्तो रूख देख्न पाए ।
पोखरीमा मानिस डुबेर मरेको प्रसंग जताततै सुन्न पाइन्छ । पोखरीमा पोलेर मरेको कुरा धेरैका लागि नौलो हुन सक्छ । तर, यो कुरा साँचो हो । न्युजिल्यान्डस्थित वेमांगु पोखरीमा पानी भकभक उम्लिरहेको हुन्छ । त्यसैले कुनै मानिस त्यसमा पस्यो भने डुबेर मर्नुअगावै पोलेर उसको प्राणपखेरु उडिसकेको हुन्छ । पोखरीको पानी ६० डिग्री सेल्सियससम्म तातो हुन्छ । यही तातो पानी भएको पोखरी हेर्न भनेर देशविदेशबाट मानिस जाने गरेका छन् । पोखरीको सतहमाथि कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन सल्फाइडको बाफ निरन्तर उडिरहेको हुन्छ ।
आफ्नै कापी जाँच्ने विद्यार्थी
भारतीय राज्य गुजरातमा कक्षा १२ पढ्ने एक छात्रले परीक्षामा आफूले लेखेको कापी आफैँ जाँचेका छन् । यतिमात्र होइन, उनले आफूलाई सयमा सय नम्बर नै दिनसमेत भ्याएका छन् ।
खरायोभन्दा कछुवा छिटो
नीतिकथामा बिस्तारै घिस्रिने कछुवाले धैर्यधारण गर्दै छिटो कुद्ने कछुवालाई जितेको प्रसंग हामीमध्ये धेरैले सुनेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि कछुवाले छिटो दौडिने सवालमा खरायोलाई भेटाउँदैन । तर, भारतीय शहर चेन्नईको एउटा चिडियाखानामा यस्तो कछुवा छ, जो खरायोभन्दा पनि तेज दगुर्न सक्छ ।
कति महँगो टायर !
यूएईमा संसारकै सबैभन्दा महँँगो टायर बिक्री भएको छ । कारको टायर साढे चार करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको समाचारमा जनाइएको छ । भारतीय मूलका एक व्यापारीले सञ्चालन गर्ने जेड कम्पनीले यति महँगोमा टायर बिक्री गरेको हो । कारमा २४ क्यारेटको सुनपानी चढाइएको छ । साथै, यसमा हिराजवाहरातसमेत जडान गरिएको छ । टायरलाई आकर्षक बनाउन इटालीका ज्वेलरी निर्माताको सहयोग लिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
ब्याटम्यान, स्पाइडरम्यान, आइरनम्यान आदि सुपरहिरो फिल्ममा देखिन्छन् । उनीहरू अस्पतालमा देखिए भने के हुन्छ ? रमाइलै हुन्छ । अल्बानियामा १ जुनमा एउटा अस्पतालमा थुप्रै सुपरहिरो आए । उनीहरूलाई देखेर अस्पतालका बिरामी साह्रै खुशी भए ।
अनौठो रोगबाट पीडित छन् रमेश दर्जी । उनको शरीर पत्थरमा बदलिइरहेको छ । उनका आमाबुबा असाध्यै दुःखी छन् । बाग्लुङ घर भएका उनको अहिले उपचार भइरहेको छ ।
अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्डमा बस्ने एक व्यक्ति शानले गोहीमा सवार हुन्छन् । उनी रब ब्रेडल हुन् । ६५ वर्षीय रबमाथि गोहीसहित अनेक जनावरले ४० चोटिभन्दा बढी हमला गरिसकेका छन् । तर, उनी जनवारको टोकाइलाई ‘लभ बाइट्स’ भन्छन् । उनी १ सय ७५ एकड क्षेत्रफल भएको वन्यजन्तु निकुञ्जमा आफ्नो भतिजासँग बस्छन् ।
किन हुन्छ माछाको वर्षा ?
संसारका कैयौँ देशमा जलीय जीवहरूको वर्षा देखिएका छन् । यस्ता घटनाले मान्छेलाई भयभीत तुल्याउँछन् भने वैज्ञानिकहरूलाई नयाँ तरिकाले सोच्न विवश पार्छन् ।
दुश्मनीको सम्झनामा रस्साकसी
यो तस्बिर एस्तोनियाको सारेमा द्वीपको हो । गएको शनिवार यहाँको सोएला पोर्टमा सयौँ मान्छेले डोरी तान्ने खेलमा भाग लिए । डोरीको लम्बाइ १० किलोमिटर थियो । यो रस्साकसी दुई दुश्मन टापू सारेमा र हुइमाका बीचमा हरेक वर्ष हुन्छ । यसमा बाल्टिक सागरका दुवैतिरका सयौँ मान्छे सरिक हुन्छन् । खेलमा जित्नेले कुनै ठूलो पुरस्कार हासिल गर्दैन । तर, खेलाडीहरू आफूलाई कुनै योद्धाभन्दा कम महसुस गर्दैनन् ।